News Collection: प्रचण्डको गद्दी खोसिने निश्चित
प्रचण्डको गद्दी खोसिने निश्चित
काठमाडौँ । माओवादी पार्टीमा विगत दुई दशकदेखि कायम प्रचण्डको एकछत्र राज (तन्त्र?) अब अन्त्य हुने भएको छ। आफूले निर्वाह गरिरहेको पदीय जिम्मेवारी सुम्पिएर प्रचण्डलाई 'हिरो' बनाउनुहुने मोहन वैद्य किरण कस्सिनुभएपछि प्रचण्ड 'जिरो' बन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ। प्रचण्डमा निहित शक्ति बाँडफाँड गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीअन्तर्गत लैजान वैद्यले गर्नुभएको प्रयासमा डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र लीलामणि पोखरेलहरूसमेतको साथ रहेको छ।
संविधानसभाको संसदीय दलमा वैद्य–बाबुराम पक्षमा दुईतिहाइ मत जुटेको छ भने केन्द्रीय समितिमा समेत दुईतिहाइ पुर्यारउने प्रयास वैद्यबाट भइरहेको छ। एक सय छयालीस सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा वैद्य समर्थकहरूको सङ्ख्या कम्तीमा अठचालीस (४८) तथा भट्टराई समर्थकहरूको सङ्ख्या कम्तीमा बाइस (२२) रहेको बताइन्छ। पूर्व एकता केन्द्रको पृष्ठभूमिका तेत्तीस सदस्यमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशका समर्थकहरू बीसजनाको हाराहारीमा रहेको ठानिन्छ। श्रेष्ठको समेत साथ पाएपछि प्रचण्डविरुद्ध केन्द्रीय समितिमा पनि संविधानसभा दलमा झैं वैद्य–बाबुराम पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
दुवै निकायमा प्रचण्ड चालीस प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा रहनुभएमा उहाँले बेग्लै राजनीतिक दल खडा गर्ने हैसियत गुमाउनुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड या त शक्तिहीन भएर बस्न मञ्जुर हुनुपर्नेछ या उहाँले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्नुपर्नेछ। वैद्य र भट्टराई सकेसम्म प्रचण्डलाई छुट्टिएर जान नदिन कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउन किरणले प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभएको छ। तर, उहाँले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै संसदीय दलमा हैसियत सिद्ध गर्न चुनौती दिनुभएको छ। प्रचण्ड तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा पनि हुनुहुन्नथ्यो।
उहाँ केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक वा कुनै रूपको विशेष सम्मेलन गरेर समस्याहरूको निरूपण गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर, वैद्य र बाबुरामले त्यसो गर्न मान्नुभएन। उहाँहरूले असार २९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न चर्को दबाब दिनुभएपछि मात्र प्रचण्ड बैठक बोलाउन बाध्य हुनुभएको हो। असार २९ को बैठक स्थगित गराइने हो कि भन्ने कुरामा चिन्तित वैद्यले कुनै पनि हालतमा बैठक पन्छाउन नदिने अठोट गर्नुभएको बताइन्छ। कदाचित बैठक रोक्ने प्रयत्न भएमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै बैठक सञ्चालन गरी एउटा निष्कर्षमा पुर्या्उन वैद्य पक्ष दृढ रहेको छ। पार्टीलाई एकल होइन सामूहिक नेतृत्व–प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न वैद्य आफूले सङ्गठनसम्बन्धी, डा. बाबुराम भट्टराईले मोर्चा र सरकार, महासचिव रामबहादुर थापा बादलले सैन्य तथा लडाकुसम्बन्धी विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्ने योजना बनेको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई संसदीय दलको उपनेता बनाइने र सरकारमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएमा उहाँकै नेतृत्वमा सहभागी हुने सोचअनुरूपको समझदारी बनाउन किरण राजी हुनुभएको छ। प्रचण्डको झुटा आश्वासन र 'मारुनी कार्यशैली'बाट हैरान नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वैद्यको कुराले केही भरोसा जगाएको बुझिन्छ। तर, प्रचण्ड श्रेष्ठलाई आफ्नै पक्षमा राखिरहन फेरि पनि भरमग्दुर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मंगलबार बिहान पनि उहाँले आफ्नो खास मानिस वर्षमान पुनलाई नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासस्थान पठाएर 'धर्ना' बस्न लगाउनुभएको थियो। कदाचित श्रेष्ठको साथ छुटेमा लीलामणि पोखरेल र अमीक शेरचनको साथ प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहुने बताइन्छ।
जे होस्, प्रचण्ड पछिल्लो चरणमा अत्यन्त कमजोर हुनुभएको छ। दुई दशक पुरानो आफ्नो 'गद्दी' जाने स्थिति आएपछि प्रचण्डको कार्यव्यवहार थप असन्तुलित र अस्थिर हुँदै गएको छ।